I-Google Earth - Ikhasi 3 - Geofumadas
IGaia GPS, ukuthabatha i-GPS, i-Ipad kunye nemizila yeselula
Ndikhuphe isicelo se-Ipad esishiye ngaphezu kokuzinelisekile, kwidingo kufuneka ndiyenze ukulandelela nge-GPS ukuze ndiyibukele kwi-Intanethi okanye nge-Google Earth. Le yiGaia GPS, isicelo esineendleko zedola ye-12 kuphela kodwa esebenzayo ...
Umhlaba ka-Google GPS iPad KML
Apple - Mac, GPS / Izixhobo
I-Thematic kwiminyaka eyi-3 yamaGeofumadas
Emva kweminyaka emithathu engaphezulu kweblogi, nantsi ndishwankathela ezinye iinkcukacha ezandincede ndicwangcise izihloko kunye nezinto eziphambili kwi-2011. Ukuzama ukuhlala kumxholo ocatshangelwe kwisithuba sokuqala, iindidi ezipheleleyo ziye zaba yi-31. Njengomgca oqhelekileyo ndacetyiswa kweso sithuba ...
Ngokukhupha kunye nemida i-Facebook iya kuba yinto eqhelekileyo yeenjongo zorhwebo nezemfundo. Ukuba "i-intanethi yabantu" iinkampani ziphendukele amehlo abo kuluhlu lwabantu abadibaniselanayo kunye nolunye, oluye lunika ixabiso ngaphezu kwenethiwekhi yentlalo yoluntu. Enye yezona zinto zibalaseleyo ...
Ixesha elidlulileyo sathetha ngeendlela ezithile zokuba kutheni iMapServer kunye neziseko ezisisiseko zokufakela. Ngoku makhe sibone ezinye zezinto eziqhutywe ngayo ekusebenziseni kunye neemephu zamaCapapan. Lapho iphakanyisiwe Emva kokuba i-Apache efakwe, i-default directory yeMapServer yifolda OSGeo4W ngqo kwi C: / Ngaphakathi, kukho ...
Ukuthatha inxaxheba kwingxoxo yakutshanje kunye neziko leCadastral elalifuna izinto zokupapasha iimephu zazo, ndiza kufutshane into ebaluleke kakhulu ukubuyisela ukuhlangulwa kwesihloko kuluntu. Mhlawumbi ngelo xesha kuya kunceda umntu ofuna ukwenza isigqibo okanye acele uncedo lwe-geofumed. Kutheni i-MapServer Isimo sasingumntu, owayenabo ...
Dweba kwi-Intanethi kwiGoogle Maps
Khawucinge ukuba sifuna ukuthumela umdwebo wemephu kumthengi ukujonga kwi-Intanethi okanye kwi-GPS ye-navigator. Ngokomzekelo, isalathiso esinokuyithengisa, kunye nendlela yokufika apho kunye neendlela zokuhamba kwendlela. Omnye umzekelo unokuba yindawo yombono we-MODIS wecaladi ngaloo mini, apho ...
Google umhlaba / imephu, GPS / Izixhobo
Ngosuku olulandelayo ndakuxelele ngeendaba ukuba i-2.0 inguqulo ye-PlexEarth Tools ye-AutoCAD yayiza kuzisa, enye yezinto ezibonakalayo ezibonakalayo endandizibonayo kwiGoogle Earth ngelungu le-AutoDesk Developer Network (ADN). Namhlanje ikhutshwe i-Beta, inokukhutshwa, ivavanywe kwaye ibalulekileyo ...
Kwiposi langaphambilini sasiyi-georeferenced umfanekiso oqulethe imida, ngoku sifuna ukuyiguqula kwii-Civil 3D. Ukulungelelanisa iifowuni Kule nkqubo kukho iiprogram ezenza phantse inkqubo, njenge-AutoDesk Raster Design, elilingana ne-Descartes eBentley okanye i-ArcScan kwi-ESRI. Kule meko ndiya kuyenza ngeenyawo, ...
Ngaphambi kokuba sibone indlela yokudala imida esekelwe kwinethiwekhi yamaphuzu athathwe entsimini. Ngoku siza kubona indlela yokwenza ngayo, ukususela kumaphulo asele sele ekhona kwimephu echongiweyo. Njengoko senze ngokuyila kweendlela, siya kukwahlula ngamanyathelo, ukuze iposi ingahambi ixesha elide ngaphezu kwefart ...
Kwiintsuku ezimbalwa ezedlule ndiqalise uphuhliso kwiNET Visual Basic ye-Microstation, endiyithembayo yokuyicombulula umda weBentley Map, kunye noMlawuli weGeospatial. Ngenxa yoko, ndiyifake umfundi omdala esiye saqala ukuba yi-geofumar xfm apho xa ephuma kwi-comal, ene-cappuccino enhle kunye ne-amareto ...
NgoNovemba wonyaka odlulileyo ndenze uvavanyo lwe-1 inguqulo ye-PlexEarth Tools ye-AutoCAD, ephakathi kwezinto ezintsha eziquka ukusebenzisana kwe-AutoCAD kunye neGoogle Earth. Kule sihloko kukho iziganeko ezinjengeStchmaps, Kmler, CounturingGE, kml2kml, kwimeko yePlex, kwindlela yam, enye yeyona nto iphucukileyo kakhulu endiyibonayo ...
Ikhasi langaphambili Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 ... Page 15 kwiphepha elilandelayo